कसको सेना शक्तिशालीः रूस या अमेरिका ? - Saptakoshionline
कसको सेना शक्तिशालीः रूस या अमेरिका ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १७, २०७५ समय: ३:०५:३६
केही समययता अमेरिका र रुसबीच फेरि वाकयुद्ध सुरु भएकाे छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एकअर्कालाई भनेका विषयमा अमेरिकामा चर्काे अालाेचना भइरहेकाे छ ।
अर्काेतिर चीन र रुसबीचकाे सहकार्यले अमेरिकालाई रुससँग सतर्क पनि बनाएकाे छ । अर्काेतिर अमेरिकासँगै युराेपेली देश र बेलायतले पनि रुसविरुद्ध कदम चालिरहेका छन् । तर, खासमा किन त ? अाखिर कसकाे सेना शक्तिशाली छ ?
कसका सैनिक शक्तिशाली
द स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्चको रिपोर्ट अनुसार, विश्वभर सैन्य खर्चमा प्रत्येक वर्ष १ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । तर अमेरिका आफूले मात्रै ४३ प्रतिशत खर्च गर्दै आइरहेको छ ।
अमेरिका र सुरक्षा परिषदका बाँकी सदस्य देशको सैन्य शक्तिमा भएको ठूलो लगानीलाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन । अमेरिकाको अनुसार बाँकी देश अन्तर्राष्ट्रिय मिशन या सैन्य हस्तक्षेपमा आफ्ना सैनिक लगाउँदैनन् ।
अमेरिकाको जस्तो विश्वमा सैनिक अखाडा पनि छैनन् । बाँकी देशले आफ्नो राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अभियानसम्म नै अहिलेलाई सिमित राखेका छन् । द स्कटहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्चको रिपोर्ट अनुसार सेना खर्चको विषयमा रुस चौथो नम्बरमा पर्छ । अमेरिका, चीन र साउदी अरब क्रमश एक दुई तीन नम्बरमा छन् ।
हार्वर्ड युनिभर्सिटीका एनालिस्ट दमित्री गोरेनबर्गको भनाइ छ, कि रुसले २००९ मा आफ्नो सेनाको आधुनिकीकरण सुरु गरेको थियो । रुस सोभियत यात्राको हतियारबाट मुक्त पाउन चाहन्थ्यो । त्यसकै लागि यो काम उसले छिटोभन्दा छिटो गर्यो ।
गत वर्ष अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स् मेटिसले भनेका थिए, अमेरिकालाई मुख्य रूपमा रुसबाट खतरा छ । खतराबाट बच्नका लागि जतिबेला पनि तयार रहिरहनुपर्छ ।
अमेरिकाको उपस्थिति र उसको सैन्य शक्ति विश्वका कैयौं देशमा फैलिएका छन् ।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले इटालीको एक पत्रिकालाई अन्तर्वाता दिएका थिए । जसमा उनले भनेका थिए– ‘तपाईँ विश्वको नक्सा उठाएर हेर्नुहोस् र त्यहाँ अमेरिकी सेनाको स्थानलाई चिन्हित गर्नुहोस् । यसैबाट थाहा पाउनुहुनेछ कि, रुस र अमेरिकाबीच के छ अन्तर ।’
रुसले सैन्य शक्तिमाथि गरेको खर्च सँधै चासोको विषय बन्छ । रुसलाई कतिसम्म भनिन्छ भने, उसले जति रकम सैन्य शक्तिमा लगानी गर्छ त्यति नै कम देखाउँछ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अमेरिका त्यसै अमेरिका होइन । उसको आर्थिक तागत अत्यन्तै बलियो छ । आर्थिक सम्पन्नताको मामलामा पनि अमेरिका र रुसबीच कुनै तुलना हुन सक्दैन ।
रुससँग प्रभावशाली परमाणु हतियार छ, जसले अमेरिकालाई पनि नष्ट गर्न सक्छ भन्ने मान्यता धेरैले राखेका छन् । तर रक्षा विश्लेषका अनुसार पुटिनले अमेरिकामाथि हमला गरेर आफूलाई जोखिममा राख्दैनन् । किनकि, यो आत्मघाती कदम पनि बन्नसक्छ ।
एअर फोर्सको मोर्चामाथि पनि अमेरिकाको तुलना रुससँग हुन सक्दैन । तर अमेरिकी एअर फोर्सको अपरेशनमा सर्बिया, इराक, अफगानिस्तान र लिबियामा रणनीतिक रूपले अगाडि आउन सक्छ । यद्यपि अब शीत युद्धको सकिएको विश्लेषहरूको मान्यता छ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने मिसाइल आफूले बनाएको दाबी गरे । पुटिनले दाबीमा, मिसाइलाई कसैले रोक्न नसक्ने पनि बताए ।
अमेरिकी राष्ट्रपनि डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्ना परमाणु हतियारलाई आधुनिकीकरण गर्ने आदेश दिइसकेका छन् ।